Daawo Sawirada Shirkii Japan oo soo geba-geboobay iyo qodoba muhiim ah oo ka soo baxay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamud iyo Ra’iisul Wasaaraha Japan Mudane Shinzo Abe ayaa wada shir guddoomiyey Shirkii Gaarka ahaa ee Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Yokohama ee dalka Japan.
Ra’iisul Wasaare Shinzo Abe ayaa sheegay in Dowladda Japan ay si toos ah kaalmada u siin doonto Dowladda Soomaaliya bacdamaa xiriirkii labada dal dib loo yagleelay muddo 22 sano ka dib.
Shirkan ayaa waxaa furay Ra’iisul Wasaare Shinzo Abe iyo Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamud iyadoo ay ka soo qeyb-galeen Madaxweynayaasha Djibouti, Tanzania, South Sudan, Algeria, Madaxweyne Ku xigeenka Kenya, Ra’iisul Wasaarayaasha Ethiopia, Masar, Ku xigeenka Ban-ki Moon ee arrimaha Africa, Wasiirada Arrimaha Dibedda Brundi, Libya, Siera-leone, Uganda iyo wafuud ka socotay waddamada USA, UK, Australia, Italy, South Africa, IGAD, WFP iyo mas’uuliyiin kale.
Madaxweynaha ayaa khudbadiisa ugu mahad-celiyey Ra’iisul Wasaaraha iyo shacabka Japan sida quruxda badan ee loo soo dhaweeyey iyo sida ay Japan Hormuud uga noqotay shirkan Qaaska ah ee Soomaaliya.
Madaxweynahu waxuu sheegay in shirkan loo baahanyahay inuu kaabo shirkii London oo la isku af-gartay in Soomaaliya laga saacido dhanka amniga, garsoorka iyo maareynta maaliyadda.
Madaxweynahu waxuu codsaday in shirkan ay Japan iyo beesha caalamkuba xoogga saaraan arrimaha dib u dhiska hay’adaha dalka iyo shaqaalahooda, dib u dhiska waddooyinka, dekedaha iyo dhammaan goobaha ilaha dhaqaalaha laga heli koro iyo isagoo si gaar ah u xusay in Soomaaliya ay dhalinyarada ay muhiim tahay in loo helo xirfado iyo shaqo si ay bulshada iyo dalkaba wax u taraan.
Shirkan ayaa dhammaan mas’uuliyiintii goobta ka hadashay ku ammaantay Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamud iyo dowladiisa horumarka baaxadda leh ee ay ka gaareen amniga, siyaasadda iyo qorsheyaasha cad-cad oo ay la yimaadeen taasoo dhiiri gelisay in caalamku u soo jeesto arrimaha Soomaaliya.
War Deg Deg ah:Dhacdooyin aan wanaagsaneyn oo hada laga dareemayo qeybo ka mid ah deeganaada Soomaalida...
Xaalada Kacsanaan Ayaa Ka Jirta Degaanada Maokeng Iyo Kroonstad Ee Gobolka Free State Oo Ay Soomaalida Ganacsiyo Xoogan Ku Leeyihiin Kadib Markii La Weeraray Oo Qarkood Laga Qaatay Alaaba Kala Duwan Sida Uu Warbaahinta U Sheegay Sargaal Sare Oo Ka Tirsan Police-ka Ka Howlgala Gobolkasi.
Dhacdadan Cusub Ee Haatan oo Laga Soo Warinayo Gobolka Free State Ayaa Daba Socoto Rabshadaha Boobka Wata Ee Lala Beegsanayo Soomaalida Ganacsiyada Ku Leh Dalka K/Afrika oo waayihii ugu danbeeyay qaati ka taagnaa weerarada aan kala joogsiga laheyn ee burcadu ku heyso.
Afhayeen U Hadlay Police-ka Ayaa Sheegay In Xaalada Ka Jirta Degaanada Maokeng Iyo Kroonstad Ee Gobolka Free State Ay Ka Danbeeysay Kadib Markii Ay Isoo Bax Sameyeen Shucuub Ku Kacsan municipality Degaankasi Ka Jirta Balse Ay Isku Badashay In La Beegsado Ganacsiga Soomaalida Walow Aysan Xaqiijin Karin Tirasada Saxda Ah Ee Dukamaha La Weeraray Ee Hantida Laga Qaatay,
Axmed Madoobe oo bilaabay cuuryaamin nuuc kala ah oo uu kula dhaqmayo wasiirada Kismaayo kusugan.
Axmed Maxamed Islaam (Madoobe) Hogaamiyaha kooxda Raaskanbooniyiinta ee Maamulka Kismaayo isu raba ayaa waxa uu qaaday tilaaba cusub oo uu ku xadidayo dhaq-dhaqaaqa wasiirada Xukuumada ee ku sugan magaaladaasi.
Mid kamid ah nabadoonada Kismaayo oo lagu magacaabo Max’ed Ismaaciil ayaa waxa uu daaha ka rogay in Hoteelka Laga dejiyay Magaalada Kismaayo wafdiga uu Hoggaaminayo Wasiirka difaaca Soomaaliya lagu wareejiyay ciidamo ka tirsan Raaskanbooni si ay wafdiga uga ilaaliyaan nabadoonada deegaanka ku sugan oo doonaya in ay la kulmaan.
Nabadoonka ayaa sheegay in arintaasi Axmed Madoobe uu u sameynayo Caburin Siyaasadeed, maadaama hadii ay kulmaan odayaasha iyo wafdiga dowlada ka socda ay soo baxeyso waxa odayaashu u qabaan, arintaasina ay qeyb ka qaadan karto fashilaada Axmed Madoobe.
Hadalka nabadoonka ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo dhawaan Jabhada Raaskanbooniyiinta ee Axmed Madoobe ay wasiira sedax ah oo maalma ku xayiraa garoonka Kismaayo u ogolaadeen ay magaaladaasi gudaha u galaan.
Arintaan hada la shaaciyay ayaa waxa ay muujineysaa in wasiirada xukuumada ee Kismaayo loogu diray in ay howla muhiim ah halkaasi ka fuliyaan wali ay ku hor gudbanyihiin caqabado xalin u baahan.
Wasiirka arimaha gudaha oo sheegay in Maamulka Axmed Madoobe uu ka dhiganyahay cunug meher la’aan la dhalay.
Cabdi Kariim Xuseen Guuleed, Wasiirka arimaha gudaha iyo amaanka qaranka Soomaaliya, ayaa waxa uu si layaab leh oo aan siyaasad lagula leexan uga hadlay arinta ku aadan maamulka Jubaland ee dhawaan Axmed Madoobe sheegtay in uu ka hir geliyay Kismaayo.
“Maamulada la dhisay inta ay jirto xukuumadaan ma aha kuwa dowladu aqoonsantahay. Waxa ay ka dhiganyihiin ilma sharci la’an dhashay. Dowladu marnaba ma aqoonsan doonto dhamaan wixii shaci darro ah”, wasiirka ayaa ku waramay mar wax laga weydiiyay sida ay dowladu u aragto maamulka Axmed Madoobe ee Kismaayo looga dhawaaqay.
Dadka sida aadka ah u falanqeeya hadalada qayaxan ee saxaafada laga baahiyo iyada oo koo si gaar ah loo bar-tilmaamedsanayo ayaa waxa ay iftiimanayaan in hadalka wasiirka ee ah in ilma sharci la’aan dhashay iyo maamul dad badani ku daaleen uu dhalin karo khilaaf hor leh.
Hadalka wasiirka ee ah in aysan jirin wax layiraahdo mamaul gobaled la dhisay intii ay jirtay dowlada Xassan Sheekh Maxammuud ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo dhawaan Kismaayo looga dhawaaqay maamulka lamagac baxay Jubalanad ee Axmed Madoobe hogaamiyo inkasta oo shan maamul oo kale iyana isla magaaladaasi laga sameeyay.
Wiil yar oo Turki ah oo Faankii dhalinyarada Yurub & Mareeykanka meel saaray (Daawo Mucjisadaan+Warbixin) !!
Wiil aad u yar una dhashay dalka Turkiga ayaa ka yaabsaday Caalamka oo idil ka dib markii uu la soo baxay awood ka tayo badan farsamo ay ku faani jireen Dhalinyarada Mareeykanka iyo kuwa qaarada Yurub.
Wiilkaan yar ayaa Dheel qoob ka cayaar ah uga yaabsaday Caalamka oo idil kaas oo marka uu dheelayo ama Maslaxa soo fuulo mar quraah dadka ku qasabta inay fadhiga ka wada kacaan kuna fiirsadaan Niikadiisa cajiibka ah iyaga oo taagan waliba sacbinaya.
Dhalinyarada ku nool wadamada Yurub iyo Mareeykanka ayaa dheesha nuucaan ah waxa ay u soo maraan Iskuul lagu soo barto niikada balse Wiilkaan yar ee u dhashay dalka Turkiga ayaa waxaa la shaaciyay inuu dheeshaan ku soo bartay Qolka gurigiisa .
Dadka qiimeeya Niikada iyo dheesha cajiibka ah ee ku nool wadamada Yurub iyo Mareeykanka ayaa mar kasta xaqiro Dhalinyarada Turkiga ah ee mucjisadaan la timaada balse Wilkaan yar ayaa markaan lagu sheegay mid aan la xaqiri karin oo ku socda jidka Fanaankii weeynaa ee Michael Jackson.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo R/Wasaare Shinzo Abe oo markii ugu horeesay Kulmay(Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa la kulmay Ra’iisul Wasaaraha Japan Mudane Shinzo Abe, kulankan oo ka dhacay magaalada Yokohama iyadoo isla maantana uu dhici doono Shirkii Soomaaliya oo ay labada mas’uul wada shir-guddoominayaan.
Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyey Ra’iisul Wasaaraha Japan doorkiisa hoggaamineed ee uu shirka Soomaaliya ugu qabanayo dalkiisa iyo sida aan kala go’alaheyn ee dowladda Japan u saacido shacabka Soomaaliyeed.
Labada Mas’uul ayaa ka wada hadlay cilaaqaadka labada dal, horumarka amniga iyo siyaasadda ee Soomaaliya iyo dib-u-dhiska Soomaaliya. Ra’iisul Wasaaraha Japan ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadeyso kaalmada dhanka horumarinta, xasiloonida, iyo barwaaqada Soomaaliya oo uu sheegay inay muhiim tahay.
Labada mas’uul ayaa ku heshiiyey in xiriirka labada dal la sii xoojiyo.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay sida deg-deggga ah ee loogu baahanyahay in hay’adihii dowliga ahaa la horumariyo waxuuna yiri “Waxaan sameynay horumar dhanka amniga iyo siyaasadda ah, hase ahaatee caqabado fara badan baa sii jir,. Bacdamaa uu dalkayagu uu u gudbayo marxalad ka soo kabasho iyo horumar, dhalinyarada Soomaaliyeed waxey si deg-deg ah ugu baahanyihiin in xirfadahooda shaqo la dhiso eek u wajahan dhanka beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, caafimaadka iyo adeegyada waxbarashada.
Waxaan codsanayaa kaalmada Japan inay dhankaan ku wajahdo iyo kaalmo ku wajahan sidii dib loogu dhisi lahaa waddooyinka, dekedaha, garoonadda diyaaradaha, Kanaalada biyaha iyo kaalmo dhanka amniga ah.”
Madaxweynaha Soomaaliya waxuu yiri “ Soomaaliya waxey maanta galeysaa waji cusub oo u baahan in beesha caalamku ay u wajahaan si cusub oo lagu caawinayo kordhinta tayada shaqaalaha oo u ah lafdhabar ka soo kabashada iyo horumarka aan hiigsaneyno.”Waxaa jira rajo weyn oo dib loogu dhisayo dalka, laakin Soomaalida kaligeed ma sameyn karto.
Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Japan ayaa maanta wada shir-guddoomin doono Shirka Soomaaliya, Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxey ka qeyb gali doonaan Shirka Tokyo ee Caalamiga ah ee horumarinta Africa (TICAD V) oo ka dhacaya Yokohama 1da June ilaa iyo 3da June 2013.
Maxkamadda Ciiddamadda Qalabka sida oo Xukuno dil iyo diyo ku riday Dhalinyaro (Akhriso Magacyadda).
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay gowrdhow Dhalinyaro Eedeysanayaal ah ku Riday Xukuno kala duwan.
Dhalinyarada Xukunka lagu riday ayaa waxa lagu helay Dambiyo isugu jira Dil iyo dhac, waxa ayna maanta Maxkamadda soo afjartay Kiiska loo heystay.
Xukunka Maxkamadda ay riday ayaa waxa uu u kala dhacay sida:-
1-	Gacan ku dhiigle Nuur Hilowle Caddaawe, waxa uu kamid ahaa Ciiddamadda Dowladda, waxa ayna Maxkamadda ku heshay Cadeymo iyadoona ku riday Xukun Dil toogasho ah.
Gacan ku dhiigle Nuur Hilowle Caddaawe, ayaa waxaa ku cadaatay dambi la xiriira in bishii
December ee sanadkii hore uu Degmada Dharkeenley ku dilay Nin rayid ah oo ay Maxkamadu ku sheegtay Magaciisa Cabdirashiid Ciise Aw-Maxamuud.
2-	Sidoo kale Maxkamaddu waxay Xukun bixin diyo boqol halaad ah ku riday Garruun Caddow Raage oo ah dable ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kaas oo ay ku caddaatay inuu xaafadda Carrafaad ee degmada Yaaqshiid ku dilay Cabdi Cumar Cali oo isaguna dable ahaa.
Dilka iyo Xukunka ay Maxkamadu ku riday Labada Eedeysane ayaa waxa uu imaanaya Xilli ay Maxkamadda faarujineyso Xabsiyadda oo ay ku xiran yihiin Boqolaal Dhalinyaro oo isugu jira kuwa dil, dhac, Boob iyo Kufsi ka geystay Gobaladda iyo Caasimada Dalka.
Ugu dambeyntii, Maxmakadda ayaa waxa ay cafis u fidisay 2-Laba ruux oo ay ku sheegtay inay ku weysay wax dambi ah kadib markii ay dhowr bilk u waday Baaritaano.
Dowladda Somalia oo albaabo badan kasoo xirtay Maamulka Somaliland (Xog).
Wararka aan ka heleyno dhanka Xukuumadda Somalia, ayaa sheegaya in Dowladda ay xirtay Xiriiro badan oo ay Maamulka Somaliland la lahaayeen Dowladaha Caalamka.
Dowladda ayaa waxa ay warqado u dirtay Dowlado ay kamid yihiin Faransiiska,Britain, Maraykanka,Kenya,Swedan iyo kuwa kale, waxa ayna kuwar galisay in wax waliba ee Ku seeya Arrimaha Somalia lagala xaajoogo Xukuumadda Somalia oo aan la garab marin Hanaanka Siyaasadeed oo ay iminka Hirgalineyso Xukuumadda.
Dowladda ayaa waxa ay horay Warqado lagu xiraayo Xiriirka Maamulka Somaliland kala dhexeeyo Dowladaha Caalamka u dirtay Kenya, Ethiopia iyo Dowladda Djibouti, waxaana iminka bilowday Dadaalada ay Xukuumadahaasi kusoo afjari lahaayeen Xiriirka kala dhexeeya Somaliland.
Dowladda ayaa waxa ay sidoo kale, wadaa dadaalo lagu xiraayo Xarun yar oo ay Maamulka Somaliland Safaarad ahaan uga furteen Magaallada Addis Ababa ee Ethiopia, waxa ayna Dowladda Ethiopia wadaa Dadaalka ay Safaaradaasi ku xiri laheyd, iyadoona adeegsaneysa Shuruucda u degsan Ururka Midowga Africa.
Sidoo kale, QM,Britain iyo Maraykanka, ayaa waxa ay horay Qoraalo ugu direen Safaaradaha ugu muhiimsan Caalamka gaar ahaa Dowladaha Deeq bixiyayaasha iyagoona kuwar galiyay inay la tacaamulaan Dowladda Somalia oo iminka laga aqoonsaday Caalamka, waxa ayna cod dheer ku baahiyeen in lagu jiro xilliga la taageeri lahaa Midnimada Somalia.
Si kastaba ha ahaatee, Dadaalka Xukuumadda Somalia, ayaa waxaa durbadiiba hirgaliyay Dowladda Faransiiska oo iyadu mamnuuxday in Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Somaliland ka qeybgalaan shir dalkaasi ka dhacaaya oo looga arinsanaayo Arrimaha Burcad-badeedka waxaana Mas’uuli yiintaasi lagu xujeeyay inay marka qore qaatan Baasaboor Somali.
Xaflad lagu tageeray Madaxweynaha maamul gobaleedka Jubba Valley State oo la qabtay.
Xaflad balaaran oo lagu taagerayay Madaxweynaha Jubba Valley Stay Cabdi Baaleey Xuseen ayaa xalay ka dhacday Magaalada Khartoum ee xarunta wadanka Sudan.
Xafladaan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay ururka ardayda dooxada Jubba iyo Jiilka Isbaheeysiga Soomaaliyeed , waxaana xaflada ka soo qey galay mas,uuliyiin ka soctay Midowga arday Soomaalida Sudan , madaxda ururada Somaaliyeed iyo aqoon yahanada Soomaaliyed ee ku nool wadanka Sudan.
Mas,uuliyiinti ka hadashay xafladda ayaa dhamaantood sheegay in ay taageersan yihiin Madaxweynaha Maamul gobaleedka Jubba Valley State Cabdi Baaley Xuseen, iyagoona sheegay in uu yahan nin xilkas ah kana bixi kara howsha loo idmaday , waxaana mas,uuliyiinta ka hadashay xaflada ay heegeen in uu yahay Madaxweynaha maamul gobaleedka Jubba Valley State Cabdi Baaleey Xuseen nin udhashay deegaanka yaqaana waxa ay ubaahan yihiin shacabka ka soo jeeda dooxada Jubba .
Xafladaan ayaa inta ay socotay waxaa lagu soo bandhigay heesa wadani ah iyo ruwaayado soo jiitay ka soo qeeyb galayaashi xaflada.
Ugu danbeeynti xafladaan ayaa ku soo gabagaboowday sidi loogu talagay , waxaana ka soo qeeyb galayaashi xaflada ay hanbalyo udireen madaxweynaha maamul gobaleedka Jubba Valley State Cabdi Baaleey Xuseen.
Madaalaha Hobaladii Waaberi Oo si aan Caadi aheyn loogu soo dhaweeyay Magaalada Cape Town (Daawo Sawirada)
C/raxmaan Faroole oo Kenya kala kulmay waji uusan filaneynin (Waa maxay wajigaasi).
Warar horu dhac ah ayaa waxaa laga helaaya Kulan dhex maray Madaxweynaha Maamulka Puntland C/raxmaan Faroole iyo Xildhibaano, Mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Kenya.
Kulanka oo horu dhac u ahaa kulan buuxa oo ay wada qaadan doonaan Wasiiro ka tirsan Dowladda Kenya iyo Madaxweynaha Maamulka Puntland C/raxmaan Faroole, kulankaasoo looga hadli doono kala geynta uu Maamulka Puntland ka dhex waddo Xukuumadda Somalia iyo Maamulka Kismaayo, garabka Axmed Madoobe.
Warar horu dhac ah oo soo gaaraya Shabakadda ayaa waxa uu tibaaxaaya in Xildhibaano ka tirsan Dowladda Kenya ay C/raxmaan Faroole uga digeen faragalinta muuqata ee uu ku haayo Siyaasadda u dhexeysa Xukuumadda Somalia iyo Maamulka Kismaayo, waxa ayna Xildhibaanadaasi kawar heleen in Maamulka Faroole uu Hub sharci daro ah geeyay Magaallada Kismaayo.
Dhanka kale, wararka ayaa waxa ay nagu soo gaarayaan in Magaallada Nairobi uu kulan uga socdo Mas’uuliyiin ka tirsan IGAD iyo C/raxmaan Faroole, kadib markii Dowladda Somalia ay IGAD ku dacweysay Maamulka Faroole, oo Ololinaaysa Siyaasadda Dowladda iyo Kismaayo.
Warar aan ka heleyno Kulanka ayaa sheegaya in Ujeedka C/raxmaan Faroole loogu yeeray ay tahay inuu joojiyo fara galinta muddooyinkaani uu ku haayo Kismaayo, gaar ahaan iska horgeynta Xukuumadda iyo Garabka Axmed Madoobe.
Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in Dowladda Kenya, ay go’aan satay inay joojisay hurinta Siyaasadda Dowladda iyo Garabka Axmed Madoobe, waxa uuna digniinta la siiyay Faroole kusoo beegmeysa Xilli laga warhelay inuu Hub ugu deeqaayo Garabka Axmed Madoobe.
Si kastaba ha ahaatee, lama Oga waxa kasoo bixi doona Kulanka IGAD iyo C/raxmaan Faroole, markii laga reebo in Xildhibaano ka tirsan kuwa Kenya ay C/raxmaan Faroole uga digeen Faragalinta Siyaasadda Dowladda iyo Kismaayo.
Daawo Sawirada:Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud iyo C/Raxamaan Faroole oo si kadis ah isku arkay dalka kenya.
Madaxwaaeynaha Puntiland ayaa Nairobi u tagay sidii uu taageero ugu raadin lahaa Maamulka Jubaland State oo Dowlada Soomaaliya iyana si weyn uga soo horjeedo taa oo keentay in Madaxweyne Faroole marar badan hadalo uu jeediyay uu Dowlada siyaasadeeda ku weeraro.
Dowlada oo Ciidamo tiro badan u direysa Kismaayo iyo Xog laga helay Halka ee marayaan Ciidamadaasi(Top News)
Sida aan ku helnay Warar hoose Dowlada Soomaaliya ayaa qorsheeneysa in ciidamo tiro badan oo katirsan milatariga ay geyso Magaalada Kismaayo si halkaasi loogu baahiyo awooda Dowlada ku leedahay Gobolada Jubooyinka gaar ahaan Magaalada Kismaayo.
Ciidamadan katirsan Milatariga ayaa siyaabo kala duwan uga baxaya Magaalada Muqdisho iyo Gobolka Gedo kuwaa oo la qorsheenayo in ee kaabaan Ciidamada kale ee Dowlada katirsan ee hada ku sugan Qeybo kamid ah Magaalada Kismaayo.
Ciidamada ka imaanaya dhinaca Gobolka Gedo ayaa la qorsheeyay in dhulka ee kasoo galaan Magaalada Kismaayo iyaga iyo hubkooda waxaana hogaamin doona Abaanduulaha Ciidanka Xooga ee Gobolka Jubada Hoose oo hada Gedo kusugan.
Ciidamada iyana laga dirayo Magaalada Muqdisho ayaa la qorsheeyay in Kismaayo ka galaan dhinaca Badda iyaga oo ka baxaya Dakado macmal ah oo kuyaala Muqdisho Duleedkeeda sida Dakada Ceel Macaan iyo kuwa kale.
Ilaha warkan aan kasoo xiganay ma bixin faah faahino intaasi dhaafsiisan sidoo kale ma shaacin sababo milatari awgeed xiliga ee Ciidamadan baxayaan ayna tagaan Gobolka Jubada Hoose gaar ahaan Magaalada Kismaayo.
Magaalada Kismaayo hada waxaa kusugan Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumada Soomaaliya iyo Saraakiil ciidan kuwaa oo halkaasi u jooga sidii Ciidanka Xooga Soomaaliyeed dib u habeyn loogu sameyn lahaa loona qalabeyn lahaa si awoodooda u noqoto mid muuqata.
Dowlada Soomaaliya ayaa mudooyinkii ugu dambeeyay waday abaabulo xoogan ay ku dooneyso in ay isku fidiso qeybo kamid ah Dalka gaar ahaan Magaalada Kismaayo oo awooda Magaaladaasi ay isxijiyeen Ciidamada Raaskanbooni uu Hogaamiyo Sheekh Axmed Madoobe oo hada durbaan colaadeed Kismaayo ka garaacaya.
Prof Jawaari oo Magaciisa iyo Sawirkiisa laga been abuurtay lagana sheegay Warar aan jirin.
Weriye six un loogu dhaawacay Kismaayo (Akhriso Magaciisa)
Wararka naga soo gaaraya Magaallada Kismaayo ee xarunta Gobalka Jubadda hoose, ayaa waxa ay sheegayaan in Kooxo hubaysan ayaa Habeennimadii xalay dhaawac ugeesteen Weriye ka shaqeynaye Warbaahinta Magaalada Kismaayo.
Xilliga la weeraray Weriyaha ayaa waxa uu kusii jeeday hooygiisa, isagoona xiligaasi kasoo baxay goobtiisa shaqada.
Weriyaha la dhaawacay ayaa waxaa Magaciisa lagu sheegay Cabdulqaadir Jiijiile, waxaana lagu soo waramaaya inuu kamid ahaa Weriyayaasha Royal Tv.
Mid kamid ah Weriyayaasha ka hawlgalo Kismaayo, ayaa waxa ay Shabakadda u xaqiijisay in wariyaha uu nool yahay rasaasta lagu riday ay kaga dhacday dhagta hoosteeda, balse Ujeeda uu ahaa in la qaarijiyo, sida uu Weriyaha Haddalka u dhigay.
Si kastaba ha ahaatee, Waxan la garaneynin Ciddii ka dambeysay Weerarka lagu qaarijin lahaa Weriyahaasi hase yeeshee uu ka bedbaaday.
Madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo u ambabaxay dalka japan.
Madaxweeynaha J.F soomaaliya iyo wafdi uu hogaamimayo ayaa u ambabaxay dalka Japan oo uu kaga qeeyb galayo shirka 5aad ee caalamiga ah ee hormarinta afrika. (TICAD)
Wafdiga Madaxweynaha ayaa ayaa waxaa ka mid ah ra,iisulwasaare ku xigeeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan iyo xubno kale.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka ku sii sagotiyay Gudoomiyaha baarlamaanka soomaliya,Ra,iisulwasaaraha Xukuumada soomaaliya,iyo xubno ka tirsan labada gole.
Afhayeenka Madaxtooyada soomaaliya Inj C/raxmaan Cumar Cimaan “Yariisow” ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu casuumaad rasmi ah ka helay ra,iisul wasaaraha dalka Japan,isagoo sheegay in 31 bishan uu ka qeyb galayo madaxweeynaha soomaaliya shir gaar ah oo ay si wada jir ah u gudoomin doonaan madaxweynaha soomaaliya iyo ra,iisulwasaaraha Japan oo ka dhacaya magaalada Yokahama ee dalkaasi.
Inj C/raxmaan Yariisow ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu ka qeyb gali doono shir 1-3 bisha June ay dowlada Japan mar walba u qabato wadamadaa afrika,oo looga hadlay xiriir wanaagsan oo dhex mara dalka Japan iyo wadamada kale ee qaarada afrika.
Inj C/raxmaan Cumar Yariisow ayaa intaasi ku daray in Madaxweynaha soomaaliya uu 15ka bisha soo socota uu magaalada London uga qeeyb gali doono shirka wadamada warshadaha ku hor maray ee G8ka.taasi oo noqon doonta markii ugu horeeysay oo madaxweyne soomaaliyeed lagu casuumo shirka wadamada G8ka.
Madaxweyne Faroole oo Gaaray Kismaayo iyo isgarsiinta oo hawada ka maqan.
Madaxweynaha maamulka Puntland C/raxmaan Maxamuud Faroole ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada hoose.
Inta uusan madaxweyne Faroole gaarin Kismaayo ayaa waxaa la demiyey hawadana laga saaray isgaarsiinta magaaladaas guud ahaan ka dib markii uu amar ka soo baxay maamulka Axmed Maadoobe.
Illaa hadda ma jiraan warar intaas dhaafsan oo ka soo baxaya socdaalka madaxweyne Faroole uu ku tegay magaalada Kismaayo hase ahaatee Puntland ayaa si cad u taageertay maamulka Jubaland garabka Axmed Madoobe.
Madaxweynaha Puntland ayaa horey dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan u taageeray shirweynihii maamul sameynta Jubooyinka ee madaxweynaha maamulka Jubba-land loogu doortay Axmed madoobe kaasoo ay ka soo horjeestay dowlada Somalia oo ku tilmaantay inuusaan waafaqsaneyn dastuurka dalka u yaala.
Cabdi Wali Maxamed Qanyare Afrax oo goordhaw loo dhaariyay in uu kamid Noqdo Baarlamaanka Soomaaliya kadib markii ..
Waxaa Maanta Baarlamaanka Soomaaliya lagu hor dhaariyay Xildhibaan Cabdi Wali Maxamed Qanyare Afrax oo badalay Aabihiis kadib markii uu Gudoonka Baarlamaanka u gudbiyay warqad istiqaalo ah.
Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Rug cadaaga Siyaasada Soomaaliya Maxamed Qanyare Afrax uu u soo gudbiyay Warqad istiqaalo ah laguna badalay Wiilkiisa Cabdi Wali Maxamed Qanyare kadib markii ay isku raaceen beesha uu ka dhashay in lagu badalo Xildhibaankan cusub.
Isla maanta ayaaana xarunta Golaha Shacabka lagu dhax dhaariyay Cabdi Wali Maxamed Qanyare oo kamid noqonaya Baarlamaanka Soomaaliya waxa uuna maanta ku sugan yahay xarunta Golaha Shacabka halkaas uu kaga qeyb galayo Shirka Baarlamaanka lee yihiin.
Waxaa Mudooyinkii ugu dambeeyay siyaabo kala duwan xubinadimadii Baarlamaanka uga tagay siyaasiyiin caan ah iyo Masuuliyiin horey dalka xil uga soo qabtay kuwaa oo boosaskooda lagu badalay rag kale oo cusub ee soo gudbiyeen Odayasaha beelaha ee ka dhasheen raga shaqada ka tagay.
Madaxweynaha Somalia oo amar culus ku bixiyay in Ciidamada Kenya iyo Ethiopia ka baxaan Dalka .
M/weynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Max’ud ayaa ku amray ciidamada dawlada Kenya ee Soomaaliya jooga inay muddo dhan 48 saacadood u qabtay inay dalka uga baxaan kadib markii uu sheegay inay markoodii horeba kusooo galeen si sharci darro ah sidoo kalena M/weynuhu waxaa uu amray in dawlada Ethiopia ay iyana ciidamadeeda deg deg ugala baxdo Soomaaliya.
War M/weynuhu uu soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in M/weynuhu uu doonayo in ciidamada Kenya ay muddo 48 saac ah ay xaduudaha dib ugu laabtaan waxaana M/weynuhu uu ku eedeeyay ciidamada Kenya inay taageero siiyeen maleeshiyo beeleedyo ka jira Soomaaliya.
“Anigoo Ah M/weynaha Jamhuuriyadda Federalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Shiikh Max’ud waxaan amrayaa in ciidamada Kenya ay xaduudahooda dib ugu laabtaan muddo 48 saacadood sidoo kalena waxaan ku wargalinayaa dawlada Federalka ee Ethiopia inay deg d eg ciidamadeeda ugala baxdo Soomaaliya.
Qoraalkaan kasoo baxay xafiiska m/weyne Xasan Shiikh waxaa lagu sheegay in dawlada Soomaaliya aysan wax dul qaad ah u laheyn faragalinta sharci darrada ah ee kaga imaanaysa dawladaha dariska ah, ee ay ka midka yihiin hubeynta maleeshiyo beeleedyada waxaana ay sabab u yihiin bur burka dalkeenu ku jiro mudada 22 sano ah,waxaana uu intaa M/weynuhu intaa ku daray inay geysteen ciidamada labadaasi dal xad gudubyo bini’aadanimada ka baxsan.
M/weyne Xasan Shiikh waxaa uu sidoo kale tilmaamay inuu war qad cabasho oo uuku dalbanayo in baaris lagu sameeyo xasuuqa ay ciidamada Ethiopia iyo Kenya ka geysteen gudaha Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991,kii
“Nasiib darro waxaa aad noo wal wal galiyay waa sida ay ciidamada Kenya ug diideen wafdigii wasiirada ah inay magaalada Kismaayo inay tagaan” ayuu Yiri M/weynaha Soomaaliya.
Warkaan kasoo baxay xafiiska M/weynaha Soomaaliya Xasan Shiikh oo lagu qoray booga rasmiga ah ee dawlada Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dawlada Kenya iyo Ethiopia ay xilli walba gacan siiyaan maleeshiyaad diidan nabada iyo dawladnimada Soomaaliya isla markaana caqabad ku yihiin hormarada Soomaaliya marka loo eego dibadda iyo gudahaba.
Ugu dambeyn qoraalkaan waxaa uu u jeedinayaa dawladaha Kenya iyo Ethiopia inay qaataan amarka M/weynaha haddii kale ay wijihi doonaan iska caabin dhab ah oo ka dhan ah faragalintooda.
Ciidamada Kenya oo ku sugan gobolada Jubooyinka waxaa uu dhawaan M/weynuhu sheegay inay baal mareen sharciga ay dalka ku joogaan ee ah ka mid ahaanshaha hawlgalka AMISOM waxaana ciidamadaas lagu eedeeyaa inay dhawr jeer sheegeen inaysan mas’uul ka aheyn amaanka mas’uuliyiinta dawlada ee Kismaayo u socdaala.
Kooxo hubeesan oo Saakay Muqdisho u dishay Mas'uul caan ah (Akhriso Magaca Mas'uulka ).
Kooxo hubaysan ayaa waxa ay si arxan daro ah Saaka Xaafada Suuq Bacaad ee Degmada Yaaqshiid ugu dilay Beerey Xasan Jeeb oo ahaa Guddoomiyihii laanta Suuq Bacaad ee maamulka Degmada Yaaqshiid.
Dilka Guddoomiyaha ayaa waxaa fuliyay Ragg ku hubeysnaa Bastooladdo kuwaasoo dilka kadib si dirqi ah goobta uga baxsaday.
Sidoo kale, waxaa dilka lagu fuliyay Askari la socday Guddoomiyaha kuwaasoo durbadiiba goobka laga qaaday loona cararay Goobaha Caafimaadka.
Sida caadada aheyd waxaa Dilka kadib goobta soo buux dhaafiyay Ciiddamadda Ammaanka oo halkaasi ka qabqabtay dad farabadan oo lagu tuhunsan yahay inay indha indheynaayeen qaabka uu dilka u dhacay, waxaana loo dhaadhiciyay dhanka Saldhiga Suuq Bacaad.
Si kastaba ha ahaatee, Beereey Xasan ayaa waxaa lagu hor dilay xarunta uu Guddoomiyaha ka yahay ee laanta suuq Bacaad ee Degmada Yaaqshiid, mana jirto Cid dilaakaasi lala xiriirinaayo.
Khilaafka Dowladda iyo Axmed Madoobe oo dhaliyay in Alshabaab galaan Kismaayo (Warbixin Xasaasi ah).
Waxaa Habeennimadii xalay gudaha Magaallada Kismaayo si xoog ah looga maqlaayay Guuxa Rasaasta kuwaasoo ay furayeen Ciiddamadda Daacadda u ah Axmed Madoobe.
Rasaasta ayaa waxa ay aheyd mid leys weydaarsanaayay waxaana laga maqlaayay xaafaddo badan oo hoostaga Magaalladda Kismaayo,iyadoona ay wararku sheegayaan in Rasaastaasi ay is weydaarsadeen Ciiddamo daacad u ah Axmed Madoobe kuwaasoo la sheegay inay kala shakiyeen, halka wararka qaarna ay sheegayaan in gudaha Magaallada ay isku dhex arkeen Ciiddamo Alshabaab iyo kuwa Axmed Madoobe.
Sidoo kale, wararka ayaa sheegaya in Kooxo ka tirsan Alshabaab ay weerareen Xirooyin ay ku sugnaayeen Ciiiddamada Raaskambooni taasoo shaki galisay Ciiddamadda Dowladda oo iyaguna difaac adag galay.
Dhanka kale, wararka ayaa sheegaya in gudaha Magaallada ay galeen Ciiddamo ka tirsan Alshabaab kuwaasoo xilligii hore aan ka maqneyn Magaalladda isla markaana ku sugnaa Xaafado ka tirsan Magaallada, iyadoona inta badan Ciiddamadaasi ay kasoo baxeen Hoodka Kismaayo.
Nabadoon Kismaayo ku sugan ayaa shabakadda jornalizem u sheegay in Magaallada ay weli ku dhex jiraan Alshabaab, waxa uuna sheegay in Xilliyadda Habeenkii ay ka soo baxaan Xaafadadooda isla markaana Weeraro ka fuliyaan Goobaha Ciiddamadad Raaskambooni, iyagoona ka faa’iideysanaaya Khilaafka ka dhex taagan Dowladda iyo Garabka Axmed Madoobe.
Garabka Axmed Modoobe ayaa weli aaminsan in Kismaayo ay ku dhex sugan yihiin Alshabaab balse aysan awoodin inay Ciribtiraan Sababo la xiriira Dhanka Beelaha.
Ma cadda Weerarada Habeenkii ka dhaca Kismaayo cidda hal abuurka u ah Balse waxaa la aaminsan yahay in Ciiddamadda Axmed Madoobe ay geystaan weeraradaasi iyagoona isku muuqaal ekeysiiya Alshabaab.
Daawo Sawirada Al-Shabaab oo soo Bandhigtay Diyaarad Nuuca Dagaalka ah oo shalay kusoo dhacday Deegaanka Buulo Mareer.
Kooxda Shabaab ayaa waxa ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin Twitter-ka sawirro ay ka soo qaadeen diyaarad nuuca basaaska ah oo ku dhacday duleedka magaalada Buula-mareer ee gobalka Sh/hoose.
Waxa ay sheegeen Shabaabku in diyaradaasi ay ka heleen kaamirooyin casri ah oo ay wax ku basaasi jirtay iyo gantaalo ku xirnaa oo loogu tala galay in ay wax ku duqeyso.
Kooxdu ma sheegan in ay soo rideen diyaaradaani,waxaana dhanka kale, qirtay in ay la haayeen dowlada Mareykanka oo u isticmaasha diyaradaha nucaan ah dhulalka ay ku tebayaan inay ku suganyihiin shaqsiyaadka sida aadka ah loo badi goobayo.
Sarkaal u hadlay wasaarada difaaca Mareykanka oo diiday in magaciisa la soo xigto ayaa waxa uu qiray in diyaarada shalay ku dhacday Buula Mareer ay lahaayeen in kasta oo uusan xaqiijin ciladda kentay in ay soo dhacdo.
Daawo sawirrada: Ra’iisul Wasaaraha oo maanta furay talaalka cudurka Dabaysha, gacantiisana caruur ku talaalaya
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) oo ay wehliyaan xubno ka tirsan Golaha Wasiirada, Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Hay’adaha WHO, UNICEF, OCHA iyo xubno ka socda Waaxda Wasaaradda Caafimaadka ayaa ka qayb galay xaflad lagu daah furayey talaalka cudurka dabaysha oo wajigiisii labaad maanta si rasmi ah uu u furay Ra’iisul Wasaare Saacid.
Cudurka dabaysha oo laga ciribtiray Soomaaliya sanadkii 2007 ayaa waxaa horaantii bishaan aan ku jirno laga soo sheegay afar xaaladood oo cusub magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Waxaana sidoo kale baaritaan lagu sameeyey 400 oo qof ilaa iyo hada la xaqiijiyey in 30 kamid ah looga shakisan yahay cudurka dabaysha.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in talaakaan uu leeyahay muhiimad gooni ah loogana baahan yahay waalidiinta inay ku baraarugaan sidii caruurtooda uga talaali lahaayeen cudurkaan aan dawada lahayn.
Ra’iisul wasaraha ayaa sidoo kale sheegay in talaalkaan ay hormuud ka tahay dowladda Soomaaliya Wasaaradeeda Horumarinta iyo Adeega Bulshada isla markaana kaashanaysa Hay’ada Caafimaadka Aduunka (WHO)
“Maanta waxaa bilowday ololaha talaaka dabaysha oo socon doona mudo lix bilood ah waxaan codsanaynaa in qaybaha kala duwan ee bulshadu ka qayb qaataan sidii loo cirib tiri lahaa, waxaana si gaar ah qaybaha kala duwan ee warbaahinta uga codsanayaa inay xogta ololaha talaalka gaarsiiyaan bulsha weynta Soomaaliyeed si guul looga gaaro ciribtirka dabaysha” ayuu yiri Ra’iisul wasaaruhu.
Hadalka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa kusoo aadaya xili Magaalada Kismaayo ee ka jirto xiisad adag kadib markii Magaaladaasi looga dhawaaqay Madaxweynayaal aysan raali ka aheyn Bulshada Gobolada Jubooyinka kuwaa oo sheegaya in aayaha Jubooyinka iyaga lagala tashanayo dhinacna maray Nidaamka Dowlada Soomaaliya hada ku shaqeyso.
War Deg Deg Ah Diyaarad waxa ay tahay aan la ogeyn oo Goordhaw kusoo dhacday Buulo Mareer Holac iyo Qiiqna uu ka baxayo.
Wararka aan hada ka heleyno Deegaanka Buulo Mareer ee Gobolka Sh/Hoose ayaa sheegaya in goordhaw halkaasi ee kusoo dhacday diyaarad ilaa hada aan la ogeyn waxa ee tahay.
Diyaarada ayaa kusoo dhacday meel Qiyaastii 4-Km ujirta Deegaanka Buulo Mareer oo lagu Magacaabo Beeraha Doonshaha waxaana lagu soo waramayaa in Diyaaradu marka ay soo dhacday ee durba gubatay halkaasna ee ku bur burtay.
Holac iyo Uuro ayaa wali Diyaarada soo dhacday ka baxaya , waxaana gabi ahaan hareeyay halka ee Diyaaradu kusoo dhacday Dagaalamayaal katirsan Al-Shabaab oo diiday in dadku u dhawaadaan.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya Diyaarada soo dhacday waxa ee tahay Goob joogayaal ayaa sheegaya in Diyaarada ay tahay Nuuca Basaaska aan duuliyaha wadin ee Dornes-ka
Saraakiil katirsan Al-Shabaab ayaana xaqiijiyay in Diyaaradan soo dhacday ay tahay Diyaarad Nuuca Basaaska ah inkastoo aysan ka hadlin in ay soo rideen iyo in iskeed usoo dhacday iminkana ay hareeyeen goobta ay diyaaradu kusoo dhacday baaritaana wadaan..